Steam Tamba neProton 4.11-12 yabuda! | Linux Vakapindwa muropa
Steam Tamba neProton 4.11-12 yabuda!
Chokwadi unotoziva iyo Steam Play mutengi, Steam mutengi iyo inowanikwawo kune GNU / Linux. Iyi software inokutendera iwe kuti uwane iyo yeValve chitoro, kutenga uye kurodha mazita, maneja iwo mune rako raibhurari yemazita, kutaurirana nevamwe vatambi, nezvimwe. Uye zvakare, ine online modhi, uye imwe isina kubatika kune avo vasingade kuti chirongwa ichi chinogara chakabatana.
Zvakanaka, ikozvino Steam Play iri mune mhanza, sezvo vhezheni nyowani yemutengi aripo yakatangwa pamwe nekumwe kunonakidza kuvandudzwa uye shanduko zvichienzaniswa neshanduro yapfuura. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa kune vashandisi veLinux iri chaizvo Proton itsva 4.11-12. Iwe unotoziva kuti Proton ndeye yakavandudzwa Valve kuitiswa kweWine kuitira kuti yemuno Microsoft Windows mitambo ikwanise kumhanya zvakanaka pane yako Linux. Naizvozvo, unogona kutenga mazita aunoda yeWindows uye neStam Play + Proton, unogona kutamba pasina matambudziko (mune dzimwe nguva).
NeProton 4.11-12, kuenderana neWindows mavhidhiyo emavhidhiyo kunovandudzwa, uye mamwe matambudziko kana zvikanganiso zvingave zviripo nemamwe mazita mune shanduro dzekare zvinogadziriswa. Nerubatsiro rweDXVK, yakananga 3D grafiki API 9/10/11 mirayiridzo iri kushandurwa kuita rairo rinoputika kuitira kuti vagone kumhanya zvakare paLinux neiyi yakasimba yakavhurwa sosi graphical API. Pakati pekuvandudzwa kweimwe iyi chirongwa, iwe uchaona kuti zviputi zvaivapo neGTA V zvakagadziriswa.
Zvimwe zvigamba zvakaverengerwa zve kugadzirisa zvinetso Ini ndaive nemutungamiriri weXbox koni pamwe neElex bhatani, uye maitiro egonzo neI-2 Sturmovik yakagadziridzwa. Ehezve, pane rutsigiro rutsva rweiyo OpenVR SDK chaiyo chaiyo API, uye nezvimwe zvakawanda. Kana iwe uchida kuona iro rese runyorwa rweyakazara shanduko muProton, unogona kuona iyo changelog mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Tamba neProton 4.11-12 yabuda!
Microsoft Edge ichagadzirisa otomatiki ku "Edgium" nhasi paWindows 10. Iko hakuna zuva rekuuya kweLinux parizvino
KaOS 2020.01 inouya neKernel 5.4.7, KDE 5.17.4 uye nezvimwe